I-Shandong GP yayidweliswe kuluhlu lwezinto zokugqibela zeshishini le-China kunye nokhuphiswano lwamashishini
Nge-24 kaNovemba, i-China yesithandathu yokuqalisa kunye nokhuphiswano loosomashishini luqukumbela izixhobo zokugqibela zeshishini lokugqibela. Eli shishini lokugqibela linamashishini angama-160 ukuba abhalwe kuluhlu ngokupheleleyo, ngovavanyo lokugqibela lwayizolo usuku lonke, inani elipheleleyo lamashishini ali-18 avela kukhuphiswano lwezinto ezintsha zeshishini aza kufakwa kuluhlu kushishino, angenela ukhuphiswano lukazwelonke oluphezulu. Phakathi kwazo, kukho amashishini ali-12 kwiqela lokukhula kunye namashishini ayi-6 kwiqela lokuqalisa. I-Shandong GP yonyulelwe ukuba ibe ngumjikelo wokugqibela weshishini lezinto ezibonakalayo kukhuphiswano lwesithandathu lwe-China kunye nokhuphiswano lwamashishini.
Olu khuphiswano lwamkela indlela ye-8 + 7 yokukhetha indawo okhusela kuyo, oko kukuthi, abagqatswa abakho kwimizuzu engama-8 kwaye abagwebi babuza imibuzo kangangemizuzu esi-7. Umgqatswa ngamnye uza kufumana amanqaku kwiijaji ezisi-7. Emva kokususa elona nani liphezulu neliphantsi, amanqaku abanye abagwebi aba-5 aya kuba manqaku okugqibela.
USheng yanlin, usekela mlawuli weziko leetotshi kwisebe lezenzululwazi nezobuchwephesha, uthe kumsitho wokuwongwa: “Eli candelo lishishini lokugqibela lwezixhobo ngumsebenzi wokugqibela wolu khuphiswano. Kulo nyaka, olu khuphiswano luqinisekiswe ngokupheleleyo ziinkokheli zekhansile yesizwe, inkxaso-mali ephambili, ingqalelo ngokubanzi yamasebe ezenzululwazi nezobuchwepheshe kuwo onke amanqanaba, kwaye uninzi lwabarhwebi lube yimpendulo entle. Olu khuphiswano luxhase inani lamashishini amakhulu ukunxibelelana kwinqanaba lokhuphiswano, kwaye likwaxhasa namashishini amabini amakhulu ukuba athathe inxaxheba kukhuphiswano lobuchule. Kungathiwa ukhuphiswano lusebenze ngokubonakalayo iindlela zokukhuthaza uphuhliso oluhlanganisiweyo lwamashishini amakhulu, amancinci naphakathi. Ndiyathemba ukuba oosomashishini nabantu abavela kuzo zonke iindlela zobomi baya kuqhubeka bethathela ingqalelo kwaye bexhasa ukhuphiswano lwe-China kunye nokhuphiswano loosomashishini nokwenza ngcono nangakumbi kwixesha elizayo. ”
Ixesha lokuposa: Aprili-08-2020
Indawo yeMveliso yeZakuri, iSithili saseLinzi, iShandong, China